သဒ္ဓါလှိုင်း: December 2011
ငါမလိုချင်တဲ့ အပြုံးအတု တွေ ရလိုက်တယ်။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 10:28 AM 30 comments:
ခရစ်စမတ် သစ်ပင်လေးမျာဖြင့် ထူးခြားဆန်းသစ်စွာ အလှဆင်ယင်ခြင်း မရှိသောအိမ်လေးတခုထဲတွင် အချိန်ကာလများ တရွေ့ရွေ့စီးမျောရင်း ကုန်ဆုံးခဲ့ရပါသည်။ တခါတရံတွင် နှင်းခဲများ ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသော အေးချမ်းမည်ဟု ထင်ရသည့် နေရာလေးများကို သွား၍ နှင်းခဲလေးများနှင့် တို့ထိကစားချင်ပါသည်၊ နှင်းခဲလေးများကို ကိုင်လိုက်လျှင် အေးစက်စွာ ကျင်ကနဲဖြစ်သွားမည့် ရသလေးတခုကို မက်မက်မောမော ခံစားကြည့်ချင်ပါသည်။ ဘယ်လောက်ပင် နှင်းကို တမ်းတစေကာမူနှင်းခဲများကျနေခြင်းမရှိသော မြူများဆိုင်းနေသည့် နေရာလေးတခုတွင်ပင် အေးချမ်းသည့် ဥတုလေးတခုအဖြစ် ထွေးပိုက်ပြီး ကုန်ဆုံးနေခဲ့ရပါသည်။ ကျမ မပိုင်ဆိုင်သော အချိန်တခုကို ရွေးချယ်ခွင့် ရှိမည်ဆိုလျှင် နှင်းများ အဆုပ်လိုက် ကျနေပြီး တဖြောက်ဖြောက် ကျနေမည့် နှင်းမှုန်များကြား အေးခဲနေသော နေရာလေးတခုတွင် ပြေးလွှား ဆော့ကစားရင်း ခနတာ နားခိုချင်ပါသည်။
များပြားလှသော တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် နေရသော အချိန်တခုကို မိမိကိုယ်တိုင် နှစ်သက်စွာ ဆုပ်ထားမိရဲ့သား ရှိနေသော ကျမသည် အနားယူရန် အချိန်လေးတခုကို နှစ်နှစ်ကာကာ လိုချင်ခဲ့မိပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် တပါးသူများ၏ တခမ်းတနား လှပစွာ ကျင်းပကြသော ခရစ်စမတ်ကဲ့သို့နေ့မျိုး၊ နှစ်သစ်ကူးကဲ့သို့ညမျိုးကို ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများဖြင့် ကုန်ဆုံးချင်ခဲ့ပါသည်။ ခရီးထွက်ရခြင်းကို ပျော်မွေ့သော၊ ဝါသနာပါသော ကျမသည် အခြေအနေပေးလျှင် ယခုလို ခရစ်စမတ်နေ့လေးကို ခရီးထွက်ခြင်းဖြင့် ဖြတ်သန်းချင်ပါသည်။ ကျမချစ်ခင်သော သူတချို့ကို ခရစ်စမတ်ကဒ်လေးများ ပေးခဲ့ဖူးသည်ကို စဉ်းစားရင်း ယခုအချိန်တွင် ကျမချစ်မြတ်နိုးသောသူကို ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်လေးအဖြစ် ချမ်းအေးသော ညနေခင်းလေးတွင် နွေးထွေးမှုရှိမည့် အမှတ်တရလေးတခုကို ပေးချင်နေမိပါသည်။ ပြီးလျှင် ကျမချစ်ခင်သော သူတချို့ကို ခရစ်စမတ် ပန်းစည်းလေးများပေးပြီး သူတို့၏ ပျော်ရွှင်မှုအပြုံးလေးများကို မြင်တွေ့ချင်နေပါသည်။
လောကဓါတ်တခွင်လုံး စိမ့်အေးပြီး ချမ်းအေးနေသည့်အခိုက် ကုန်လွန်ခဲ့ပြီးသော ပြက္ခဒိန်စာရွက်လေး တရွက်ပေါ်က ရက်လေးတရက်တွင် ကံ့ကော်ပန်းများ အဆုပ်လိုက်ပွင့်ပြီး ရေတမာနံ့လေး သင်းနေသော လမ်းကလေးပေါ်တွင် ခြွေချခဲ့ဖူးသည့် ပြန်မရနိုင်တော့မည့် ခြေရာလေးများကို တမ်းတနေမိသည့်အခိုက် အနွေးထည်ထူထူ ဝတ်ဆင်ထားသော သူတယောက်၏ ချိုသာသော အပြုံးလေးတခုအောက်တွင် နှလုံးသွေးများ ရပ်တန့်တော့မလောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး သူ၏စကားသံများကြားတွင် နူးညံ့စွာ ပျော်ဝင်စီးဆင်း ခဲ့ဖူးသည်ကို ပြန်လည် မြင်ယောင်နေရင်း ရှတသော သံစဉ်တခုအောက်တွင် နင့်ကနဲ နာကျင်ခဲ့ရပါသည်။
နှစ်သစ်တခုကို ကြိုဆိုသည့်ညတွင် ကျမချစ်မြတ်နိုးသော၊ ကျမချစ်ခင်သော သူများနှင့် မီးဖိုလေးနားတွင် သီချင်းများ သီဆိုရင်း ရင်ခုန်စွာနှင့် အတူရှိနေချင်ပါသည်။ သို့သော် အိပ်မက်တခုအနေနှင့်သာ ဖြစ်မည်ဟု တွေးတောမိသောအခါ နှလုံးသား တနေရာတွင် စူးနစ်မှုတခု အဖြစ်နှင့်သာ လက်ခံခဲ့မိပါသည်။ အထက်တန်းကျောင်းသူဘဝတွင် သူငယ်ချင်းတယောက်ဆီမှ နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်အဖြစ် ရခဲ့ဖူးသော ဒိုင်ယာရီစာအုပ်လေးတအုပ်၊ အနီရောင်ဆေးခြယ်ထားသော ကဒ်လေးတခုနှင့် ပိုက်ဆံအိတ်ဖြူလွလွလေးသည် ယနေ့တိုင် ကျမဗီဒိုလေးထဲတွင် ခိုအောင်းနေဆဲ ရှိနေပါသည်။
နှစ်ဟောင်းတခုကို ဝှေ့ယမ်းနှုတ်ဆက်ပြီး နှစ်သစ်တခု၏ စာမျက်နှာ ထက်တွင် ကောင်းသောခြင်းရာများဖြင့် ရေးဆွဲနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးပြီလား ဆိုသည်ကို ကျမ ကိုယ်တိုင် မေးခွန်းထုတ်နေမိပါသည်။
အကယ်၍သာ နှစ်သစ်တခု၏ စာမျက်နှာထက်တွင် သပ်ရပ်လှပစွာ ခြယ်မှုန်းချင်သော ကျမသည် ချမ်းအေးလွန်းလှသည့် အချိန်လေးတခုတွင် အေးချမ်းငြိမ်းအေးစွာ အနားယူ အိပ်စက်ခွင့်မရသည့်၊ စာသင်ခန်းများကို ကျောခိုင်း၍ ပြေးလွှားနေကြရပြီး အကြောက်တရားများနှင့် ပြည့်လျှံနေရသည့် မျက်ဝန်းများ၏ နောက်ကွယ်မှ မျက်ရည်စက်များ သုတ်ပေးခွင့်ရရန် တောင့်တနေမိပါသည်။။။
ချစ်ရတဲ့ နမ်း(အဖြူရောင်နတ်သမီး) နဲ့ ညီမငယ် ကန်ဒီ တို့ရဲ့ ခရစ်စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးလေးအတွက် အမှတ်တရ တဂ်ပိုစ့်လေးပါ။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 10:06 AM 26 comments:
ဝိုင်းစက်နေသော လပြည့်ဝန်းကို ငေးကြည့်နေရင်း ဆွဲငင်အားကောင်းကောင်းနှင့် ညှို့ငင် ဆွဲယူလိုက်သည့် ဆွဲအားတခုနောက်သို့ လိုက်ပါသွားမိလျက်သား ဖြစ်နေပေသည်။ ထိုဆွဲငင်အားက ကျမ၏ မြည်ဟီး တမ်းတသံတွေကို ခေါ်ဆောင်သွားသတဲ့လား။ ကျမပြောချင်သည့် ရင်ထဲကအသံ၊ ကျမကြားချင်သည့် စကားလုံးတွေကို ဆွဲငင်သယ်ဆောင် ပေးနိုင်မှာတဲ့လား။
သည်လိုဆိုလျှင်တော့ ကျမအတွက် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ လပြည့်ညတခု ဖြစ်မှာအမှန်ပေ့ါ။ တကယ်တော့ လပြည့်ဝန်းကြီးကို တရှိုက်မက်မက် ငေးမော မကြည့်မိသည်မှာ အချိန်ကာလအားဖြင့် အတော်ပင် ကြာမြင့်နေပေပြီ။
ကျမအလုပ်လုပ်သော အလုပ်တွင် အရေးကြီးအလုပ်တချို့ကြောင့် ညဘက်တွင်ပါ အလုပ်လုပ်ပြီး အိပ်ရမည့် အခြေအနေ ဖြစ်လာပေသည်။ ကျမမှာ လုပ်ရမည့် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များ ရှိနေသော်လည်း သူ့ကို အထူးတလည် အနားတွင် ရှိနေစေချင်သည်မှာ ကျမ၏ စိတ်ဓါတ် ပျော့ညံ့မှုကြောင့်လား။ အားငယ်တတ်မှုတခု ကျမစိတ်တွင် ကိန်းအောင်းနေခဲ့ပြီလား။ သူတပါးကို အားကိုးချင်သောစိတ်များ ပေါက်ဖွားလာခဲ့ပြီလား၊ ဆိုသည့် အတွေးများ ထင်ဟပ်လာခဲ့ပါသည်။
သေချာ ရေရာသော အဖြေတခုကိုဖြင့် ကျမနှလုံးသားထဲတွင် နက်ရှိုင်းစွာ စုတ်ချက်ရေးဆွဲမိခဲ့လေပြီ။
သူ့ကိုကျမက “ဒီည အလုပ်များလို့ ရုံးမှာ အိပ်ရတော့မယ်၊ အဲဒါ ညဘက်စောင့်ပေးပါလားလို့” အားကိုးတကြီးပြောတော့ သူကလည်း “စောင့်ပေးမှာပေ့ါတဲ့”
ကျမ တဒင်္ဂ ငေးငိုင်သွားမိတယ်၊ ကျမလုပ်ရပ်က ဟုတ်ပါရဲ့လား၊ အဝေးမှာ ရှိနေသောသူကို စောင့်ပေးဆိုခြင်းမှာ ဘယ်ကဲ့သို့သော အကြောင်းကြောင့်ပါလဲ။
“သူသာစောင့်နေမယ်ဆိုတဲ့ အသိတခုက ကျမရင်ထဲထိ တိုးဝင်စူးနစ်သွားခဲ့ပါတယ်”
သူရှိနေသည်ဟု စိတ်ထဲတွေးကြည့်ရုံနှင့် ကြောက်စိတ်များ လွင့်စင်ပပျောက် သွားခဲ့ပြီး အားအင်အပြည့် ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ သူ့၏စကားသံကပင်လျှင် ကျမအတွက် အားကိုးရာတခု ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ သူပေးပို့သော စာလေး တကြောင်းကပင် ကျမအတွက် အားထားရာတခု ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ လူချင်းမနီးသော်လည်း စိတ်ချင်းဖြင့်ပင် အသံနှင့် ဆက်သွယ်လျက် သူ၏ အားပေးမှုများကြားတွင် ကျမ နွေးထွေးစွာ အရည်ပျော်ခဲ့ရပေသည်။
ကျမ အလုပ်လုပ်နေရင်း သူရှိနေသည်ဆိုသည့် ယုံကြည်မှုတခုထဲနှင့် ကျမအလုပ်တွင် ခွန်အားအပြည့်နှင့် လုပ်နိုင်ခဲ့လေသည်။ ညတညလုံးနီးပါး အရေးကြီးသည့် အလုပ်ကို လုပ်နေသည့်ကြားမှပင် သူ အိပ်ပျော်နေပြီလား၊ ကျမအတွက် အိပ်ရေးပျက်သွားခဲ့ပြီလား၊ ဆိုသည်က အတွေးထဲ ပေါ်လာသောအခါ သူ့ကိုဒုက္ခ ပေးခဲ့မိလေပြီဟု ကျမကိုယ်ကျမ မှားမှန်းသိခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း သူအိပ်သွားမှာကိုပင် ကြောက်မိနေပါသည်။ သူအိပ်သွားလျှင်ပင် ကျမနှင့် အဝေးဆုံး ရောက်သွားတော့မလိုထိအောင် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
သည်လောက်ထိ ကျမစိတ်ကို ဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်မှာ ဘာကြောင့်လဲဟု ကျမ ရှက်ရွံ့စွာ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ဖူးပါသည်။
ကျမအလုပ်ရှုပ်နေရင်း သူ့ဆီသို့ စာတိုလေးများ ပို့ပေးနေခဲ့ပါသည်။ သူလည်း ကျမကြောင့် အိပ်ရေးပျက်ခဲ့ရပြီပဲ။ ကျမရဲ့ အားပေးနှစ်သိမ့်သံလေးက သူ့အတွက် အဓိပ္ပါယ် ရှိသော စကားသံလေးတခု ဖြစ်စေချင်ခဲ့ပါသည်။
ယခင်နေ့ရက်များကကဲ့သို့ စကားမပြောနိုင်သော်လည်း ကျမဘေးနားတွင် သူရှိနေသည်ဆိုသည့် စိတ်ခွန်အားတခုထဲနှင့် အရာရာကို လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိခဲ့လေသည်။
ကျမက “ အိပ်ချင်ပြီလား၊ အိပ်တော့လေ” လို့ ဆိုတော့ သူ့အသံက အိပ်ချင်နေပေမယ့် မအိပ်ချင်သေးကြောင်း ဆိုတော့ ကျမတယောက် ကျိတ်ပြီး ဝမ်းသာနေခဲ့ပါသည်။
သူလည်း နောက်တနေ့ အလုပ်လုပ်ရမှာ ဖြစ်သောကြောင့် သူ့ကို အိပ်ရန် ကျမပြောတော့ ကျမအတွက် စိတ်မချစွာ ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုလည်း ကျမမမေ့ပါ။
သူက “ ကောင်းပြီ၊ ဒါဆို အိပ်တော့မယ်၊ မနက်ကျမှ ပြန်တွေ့ကြတာပေ့ါတဲ့”
ဆုတောင်းလေ့ မရှိတတ်သော ကျမသည် “အိပ်မက်လှလှမက်ပါစေ” လို့ သူ့ကို ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့ ပြောချင်ပေမယ့် သူမကြိုက်မှာစိုးသည့်အတွက် စိတ်ထဲမှပင် ကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါသည်။
သူအိပ်သွားပြီဟု သိလိုက်သည့်အချိန်လေးအတွင်းမှာပဲ ကျမစိတ်များ မထင်မှတ်စွာ ယိုင်နဲ့သွားခဲ့လေသည်။ ကျမ၏စိတ်သည် သူရှိနေသည့်ဆိုသည့် စိတ်တခုထဲနှင့် လုပ်နိုင်စွမ်းအားများ ရရှိလာခဲ့သည်ကို သိရပြီး သူမရှိတော့ဘူးဟု သိလိုက်ရပြန်သောအခါ စိတ်စွမ်းအားများ လျော့ကျသွားသည်ကိုပါ သိရှိလိုက်ရပေသည်။
စိတ်သည် အရာရာကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်ပေသည်ကိုး။
ကျမနှင့် အလုပ်လုပ်သည့် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ညီမလေးက “မမ၊ ခနအိပ်လိုက်ရအောင်၊ မနက်စောစော ဧည့်သည်တချို့နဲ့ တွေ့ရအုံးမယ်လေ” ဟုဆိုလာသောအခါ
“အင်း အိပ်မယ်လေ ညီမလေး” ဟု ချိနဲ့နဲ့ ပြန်ဖြေလိုက်ပြီး
နာရီကို ကြည့်လိုက်သောအခါ မနက် လေးနာရီထိုးဖို့ ဆယ်မိနစ်ပဲလိုတော့သည်ကို တွေ့လိုက်ရသည့် အခိုက် မနက် အလုပ်ဆင်းရမည့် သူ့အတွက် အလုပ် လုပ်နိုင်ပါ့မလားဟု စိုးရိမ်သွားခဲ့မိပါသည်။
“အင်း အိပ်လိုက်တာ ကောင်းပါတယ်၊ တော်ကြာ ဧည့်သည့်နဲ့တွေ့ရင် အိပ်ငိုက်နေအုံးမယ်လို့” ကျမ ပြုံး၍ ပြောလိုက်ပြီး ထိုညီမလေးကို မလုံမလဲ ကြည့်လိုက်မိပါသည်။
အိပ်ယာထက်တွင် နောက်တနေ့ လုပ်ရမည့် အလုပ်များကို တွေးတောရင်း အလုပ်များသည့် အတွက် သေချာ မကြည့်လိုက်ရသည့် လပြည့်ဝန်းကြီးကို တမ်းတ လွမ်းဆွတ်နေမိပါသည်။
ဒီနေ့လည်း ထိုကဲ့သို့ လပြည့်ညလေးတည ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြန်ပြီ။။။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:40 AM 26 comments:
အမှတ်တရ စာစု (7)
ဝတ္ထုမဆန်သော ဝတ္ထု (4)
ခရီးသွား အတွေ့အကြုံ (3)
ငယ်ဘ၀ကို တမ်းတခြင်း (1)
ဧရာဝတီ လှုပ်ရှားမှု (1)
စွန့်လွှတ် မျှဝေသူ ..
ထိန်းချုပ် စောင့်စည်းသူ ...
ရင့်ကျက် အေးချမ်းသူ ...
ထူးမှထူးတဲ့ သူပါပဲ ...။
Save The Aged - STA
ဤနေရာကို နှိပ်၍ ကူညီပါ။
အင်္ဂလိပ်-အင်္ဂလိပ်/ မြန်မာ အဘိဓါန်
ဉာဏ်ကြီးရှင်၊ ကွန်ပြူတာနှင့် ပညာရေး
Padauk Blooms Before the Thingyan Festival 2018
By Far The Most Not addressed Basic fact About Scholastic Essay Open
ALL CLEAR: FeedMedic Alert for WelcomeNyachitthukalay
Ide Dekorasi Rumah Bag 2
avast premier92014 full version free download
ဝေးကွာခြင်း၏အခြားတစ်ဖက်၌ - မေလေး(ကန္ဒရ၀တီ)
သင့်အသားအရေအတွက် ကောင်းသော အသီးများနှင့် ဆေးဘက်ဝင် အပင်များ
ကျွန်းမကြီးကဗျာရွတ်ပွဲ ( မကွေး )
. * . * . ထာဝရကြယ်စင် . * . * . (မိုးခါး)
Compu BayDaThuKhuMa | Myanmar Astrology and MaHaBote
ဟိန်းတင့်ဇော် ဗေဒင်ပညာရယ် ဗလာရယ်
Malaysia News Information & Online Radio Blogger
Design by သဒ္ဓါလှိုင်း , Power By Blogger